Wasiirka duulista oo amar ka soo saaray adeegyada ay helaan rakaabku - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasiirka duulista oo amar ka soo saaray adeegyada ay helaan rakaabku
Wasiirka duulista ayaa amar ka soo saaray adeegyada ay helaan rakaabku gaar ahaan diyaaradaha ka shaqeeya madaarka magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa sheegay in diyaarado badan soo codsanayaan inay ka shaqeeyaan Somaliya.
’’Maalintii diyaarahada ka soo dego Garoonka waxay ay gaareen in ka badan 50 islamarkaana shaqada Garoonka ay sii balaaratay haatan waxaa jira codsiyo fara badan shirkado diyaarado oo rabo in ay ka howlgalaan gudaha dalka ’’. Ayuu yiri Duuliye Ceyndaruus Axmed Kaahiye.
Wasiirka ayaan sheegin shuruudaha looga baahan yahay.